News | tomato
News | Tag: tomato
भारतमा गोलभेँडाको मुल्य एक हप्तामा भारु १५ बाट ६० कसरी पुग्यो ?
एजेन्सी । भारतका केही ठाउँमा गोलभेँडाको मुल्य एकाएक आकाशिएको छ । भान्छामा अत्यधिक प्रयोग हुने गोलभेँडाको मुल्य एकाएक आकाशिएपछि आम नागरिकको भान्छा नै महङ्गो भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यी हुन् विश्वकै सबैभन्दा धेरै गोलभेडा उत्पादन गर्ने देशहरु
एजेन्सी । विश्वमा केही यस्ता देशहरु रहेका छन् जसले कृषिमा क्रान्ति नै ल्याए । आज उनीहरु कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा विश्वकै सबैभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने देशका रुपमा परिचीत रहेका छन् ।
किन खाने टमाटर ? यस्ता छन् फाइदा
टमाटरलाई काँचै, पकाएर, सलादका साथ वा फेरि चटनी बनाएर पनि खान सकिन्छ । यहाँ हामीले टमाटर खाँदाका फाइदाको बारेमा चर्चा गरेका छौं ।
यस्तो छ गोलभेडा खाँदा हुने ५ घाटा
गोलभेडा प्राय धेरैको भान्छामा देखिन्छ । यसलाई प्रयोग गर्ने मानिसहरुलाई प्राय यसको बेफाइदाबारे भने कमै थाहा छ । यसले गर्ने नोक्सानी थाहा पाएपछि जति नै महँगो गोलभेडा किन नहोस् तपाईमा एकखाले खुसी भने छाउनेछ ।
किन खाने गोलभेडा ? यस्ता छन् फाइदा
काठमाडौं । गोलभेडाको नियमीत सेवनले मिर्गौला र पित्तथैलीमा हुनसक्ने पत्थरीबाट जोगाउँछ । त्यस्तै, शरीरको पाचनप्रणाली र कलेजोको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मद्धत गर्छ ।
टमाटर खान रुचाउँनेहरुले यी कुराहरु थाहा पाइराख्नुहोस्
एजेन्सी–टमाटर प्राय धेरैको भान्छामा देखिन्छ । यसलाई प्रयोग गर्ने मानिसहरुलाई प्राय यसको बेफाइदाबारे भने कमै थाहा छ ।
टमाटर प्रयोग गर्नुका पाँच नोक्सानीहरु